Abicah mveliso - China abicah abavelisi kunye nababoneleli
Izinto zeSilicone zamkelwe ngabo bonke abantu ngenxa yokuba zicocekile kwaye zithambile uphawu. Izinto ezininzi ze-silicone zikudidi lokutya, zinokusetyenziselwa iimveliso ezichaphazela ukutya. Zonke iintlobo zeemilo, uyilo kunye nemibala ziyafumaneka kwizinto ze-silicone ukubonisa okanye ukubonisa intsingiselo yoyilo, nkqu nomphefumlo ngaphakathi. Izinto ze-silicone esiqhele ukuzenza ziibhanti zewilicone okanye izacholo ezinemihombiso eyahlukeneyo, imixokelelwane ephambili, amatyala efowuni, iingxowa zemali neengxowa, iikomityi, izigqubuthelo zeNdebe yeLid, iiCoasters, ezinye izinto zasekhitshini kunye ne-ETC. Izinto zinokugqithisa zonke iintlobo zemigangatho yovavanyo yi-US okanye iZiko laseYurophu, nceda uqiniseke ukuba kukhuselekile ukusebenzisa izinto ezichaphazela ukutya. Imibuzo yakho mayisingathwe zingaphelanga iiyure ezingama-24 liqela lethu elisebenza kakuhle. Owona mgangatho uphezulu, amaxabiso okhuphiswano, ixesha elifutshane lemveliso, kunye nenkonzo elungileyo kufuneka ikwenze waneliseke bubudlelwane beshishini.
Isongo esiMagneti seVidiyo eNwele